Amaphupho ngothando nomshado – iAfrika
Amaphupho ngothando nomshado
Asho ukuthini amaphupho ngothando nomshado? Lokhu kuhlanganisa ukuthandana nomuntu ngaphandle komshado wakho, amadoda angaganiwe, omakoti, omkhwenyana nezimpelesi, ukuhlukumeza, idivosi, ukuthembisa umshado, ukuqabula, ukucela umshado, ukwaliwa, imishado, umcimbi nendandatho yomshado.
Tags Umshado, Uthando
Ukuphupha ugqoke umqhele, unikezwa umqhele, noma omunye oyilunga lomndeni wakho okanye umuntu othandana naye egqoke umqhele; lokho kuyinto engeyinhle. Imvamisa leli kuba iphupho elijwayelekile kubantu asebeshadile. Lisuke libika ukuthi kumalungiselelo omshado okungaba amalobolo, umembeso, izibizo noma okunye, kusuke kukhona okungahambanga ngendlela ebifanelekile okwenze umshado wabo wangamukeleka ngokuphelele emadlozini. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi umuntu ophuphe ngomqhele ahlaziye … Read more
Uma uphupha ushada noma usemshadweni, lokho kuchaza ukuthi emndenini kukhona ozoshona noma ozovelelwa yinkinga embi. Kodwa uma umuntu ephupha akuvamisile ukuthi aziphuphele yena, iphupho lisuke limayelana nomunye umuntu.
Amaphupho ngengubo yomshado
Iphupho ngengubo yomshado lisho isifo esiwumkhokha omubi ekhaya noma ukushona komuntu aye kwelokhokho. Leliphupho lisondelene nabantu abaseduze nawe noma abayizihlobo zegazi kuwe. Amaphupho ngomshado.
Uma uphupha ukuthi ulahlekelwe indandatho yakho yomshado kusho ukuthi awusamthandi umyeni noma unkosikazi wakho. Amaphupho ngokucela umshado. Amaphupho ngobucwebe obuqgokwayo.
Uma uphupha ukuthi uphethe izimbali zikamakoti kusho ukuthi uzoshada maduzane. Uma uzitshinga noma uzilahla kusho ukuthi ngelinye ilanga uzoba nedivosi. Amaphupho ngezimbali. Amaphupho ngomcimbi womshado.
Uma uphupha ukuthi othandana naye ukushiyile kusho ukuthi umuntu onaye uzoba ngothembekile kuwe.
Uma uphupha ukuthi unabayeni abaningi noma amakhosikazi amaningi kusho ukuthi ikhaya lakho lizoba nenjabulo libe yindawo efudumele futhi umndeni wakho uzothuthuka.
Uma uphupha ukuthi kukhona okucele umshado kusho ukuthi abantu bayakuqonda futhi bazokuphatha kahle. Amaphupho ngendandatho yomshado. Amaphupho ngokuthembisa umshado.
Uma uphupha ukuthi wena noma abangani bakho nithembisa umshado akukuhle futhi akukubi. Kusho nje ukuthi awuzukuba nenhlanhla enhle noma ibhadi maduzane.
Uma uphupha ukuthi omthandayo ufuna idivosi kuwuphawu oluhle. Kusho ukuthi bakhuluma iqiniso nawe.
Uma uphupha ukuthi ushaya umyeni noma unkosikazi wakho kusho ukuthi uzoba nomshado omuhle nekhaya elinenjabulo. Uma kuwumuntu ozwana naye kuyibhadi.
Tags Ukushaya, Ukushayana, Ukushayiwa
Uma uphupha ukuthi ungumakoti ungumkhwenyana noma uyimpelesi kuyibhadi futhi uzobhekana nosizi ukhale izinyembezi maduzane. Uzolwa nophathina wakho futhi ubudlelwane benu buzophela. Amaphupho ngomcimbi womshado.
Amaphupho ngamadoda angaganiwe
Uma uphupha ukuthi uyindoda eseyintsha engaganiwe kusho ukuthi uzohlangana nomngani omdala noma isihlobo maduzane. Ukuphupha ukuthi uyindoda esikhulile engaganiwe kusho ukuthi awuzushada noma ukuthi umshado wakho uzoba nezinkinga.
Amaphupho ngokuthandana nomuntu ngaphandle komshado wakho
Uma uphupha ukuthi ube nobudlelwane nomuntu ngaphandle komshado wakho kusho ukuthi uzophulwa inhliziyo futhi uzoba nebhadi othandweni.
Tags Ukujola, Ukukipita, Ukuthandana
Uma uphupha ukuthi uyashada kuyibhadi ikakhulukazi kwabesilisa. Kusho ukuthi kuzoba nezikhathi ezinzima empilweni yakho maduzane. Uma omunye wabantu ephusheni lakho begula noma bekhubazekile kusho ukuthi uzoba nomshado ongenayo injabulo. Kuyinhlanhla kuphela uma umuntu wesifazane eziphupha eshada nekhehla. Amaphupho ngomshado nomuntu ongasekho. Amaphupho ngamakhekhe. Amaphupho ngezimbali zasemshadweni. Amaphupho ngomakoti, umkhwenyana noma impelesi.